Posted by rose of sharon at 8:13 PM 13 comments: Links to this post
၂၀၀၁ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၂၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီနဲ့၁၆မိနစ်မှာ မေမေ့သမီးလေး လူ့လောကထဲရောက်လာခဲ့တယ်… မွေးခန်းထဲကနေအပြင်ကစောင့်နေတဲ့အမျိုးတွေဆီကို ခွဲခန်းထဲကနာ့စ်က သွားပြကထဲက မျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ အသံလာရာဆီကို လိုက်ကြည့်တတ်တဲ့သမီးလေးဟာ ဆွေမျိုးတွေထဲမှာ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်… မေ့မေ့ရဲ့အပျော်ဆုံးနေ့လေးဟာ သမီးလေးမွေးတဲ့နေ့ပါဘဲ… သမီးလေးကိုကြည့်မဝလို့ ညတွေတောင် မအိပ်ဖြစ်ခဲ့တာများတယ်… မေမေ့သမီးလေး မေမေအိပ်နေချိန် တခုခုဖြစ်သွားမလားတွေးရင်း အိပ်ပျော်သွားမှာစိုးရိမ်မိခဲ့သေးတာ… သမီးလေးကို ခဏခဏနမ်းတဲ့သမီးဖေဖေကိုလည်း ဖွဖွလေးဘဲနမ်းဘို့ခဏခဏသတိပေးခဲ့ရတယ်… နုနယ်လွန်းတဲ့သမီးလေးရဲ့အသားလေးတွေဟာ နှာခေါင်းထိပ်လေးနဲ့နမ်းလိုက်တာတောင် နီရဲပြီးကျန်ရစ်ခဲ့တာမို့လေ…. သမီးလေးတခုခုစိတ်အလိုမကျဖြစ်ချိန် မျက်နှာလေးစမဲ့လာတာနဲ့ သမီးလေးမငိုခင်က မေမေက ချော့နှင့်ပြီးသားဖြစ်နေခဲ့တယ်… မေမေ့ဘဝရဲ့နေ့ရက်တွေဟာ သမီးလေးရောက်လာပြီးမှ အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြည့်ဝလာခဲ့တာ… သမီးလေးအတွက် အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိတွေနဲ့ အရင်က ကျန်းမာရေးတွေဘာတွေဂရုမစိုက်တတ်ခဲ့တဲ့မေမေက ကျန်းမာအောင် နေဘို့ သတိထားတတ်လာခဲ့ပြီ…. သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးကို အပြင်ခေါ်သွားတိုင်း တောင်းချီကြ လာနမ်းကြသူတွေများလွန်းလို့ သမီးလေး ရောဂါတခုခုကူးလာမှာ မေမေစိုးရိမ်ခဲ့လိုက်ရတာကွယ်… သမီးလေး၆လသမီးမှာ ဗီယက်နမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့တော့ မြန်မာပြည်မှာဘဲပျော်တဲ့ အမေတူသမီးလေးက ငိုလိုက်တာမရပ်တမ်း… မေမေ့ရင်တွေကွဲကြေမတတ်ပါဘဲ… သမီးလေးငိုတိုင်း ဆေးခန်းပြေးလွန်းလို့ ဆရာဝန်ကတောင် ဖုန်းဘဲဆက်ခေါ်လိုက်ပါ..သူအိမ်လာခဲ့ပါ့မယ်လို့ ပြောယူခဲ့ရတယ်… ရောက်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေအောင်နေတတ်တဲ့ သမီးလေးက တစ်လအတွင်းမှာ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ခင်မင်သွားပြီး နေသားကျသွားတော့မှ မေမေ့မှာ စိတ်ချမ်းသာရတော့တယ်…
သမီးလေးကျောင်းစတတ်တဲ့နေ့ဟာလဲ မေမေ့အတွက် မမေ့နိုင်တဲ့နေ့တနေ့ပါဘဲ…. သမီးလေးကိုကျောင်းမပို့ခင်ထဲက မေမေကငိုချင်နေခဲ့တာ… စိတ်ကို တင်းထားပြီး သမီးလေးကို ကျောင်းရောက်အောင်ပို့ရပေမဲ့ မေမေကိုယ်တိုင်က သမီးလေးနဲ့ ခဏလေးတောင် မခွဲချင်ခဲ့တာ… ဆရာမတွေရှေ့မှာဘဲ ဖက်ပြီးငိုခဲ့ကြတဲ့ နေ့တွေ ကို ခုထိသတိရနေသေးတယ်သမီးလေးရယ်…မေမေနဲ့မခွဲနိုင်လို့ပါလို့ငိုပြောလေးနဲ့အော်ငိုတဲ့သမီးလေးကို ချော့ရတဲ့ဆရာမတွေ တော်တော်မောခဲ့ကြမှာဘဲ… အတန်းထဲမှာငိုနေတဲ့သမီးလေးကို ဆရာမတွေချော့နေချိန်မှာ အတန်းပြင်မှာငိုနေတဲ့မေမေ့ကိုလဲ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလာချော့ခဲ့ရပြီး ခလေးရှေ့ရေးအတွက် စိတ်တင်းထားဘို့ ဆုံးမရှာတဲ့ အဲဒီဆရာကြီးကိုလဲ မေမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်… သူ့ဆုံးမစကားတွေကြောင့် မေမေစိတ်တွေတင်းထားနိုင်ခဲ့တာ… သမီးလေးမတွေ့အောင်ကြိတ်ငိုရင်း ကျောင်းပို့ပြီးရင်အိမ်မပြန်နိုင်ဘဲ ကျောင်းနားမှာဘဲ တချိန်လုံးစောင့်နေခဲ့တဲ့နေ့တွေဟာ အခုထိမနေ့ကလိုပါဘဲ….
သမီးအတွက်မောင်လေးမွေးပေးပြီးတဲ့နောက်တပတ်မှာ သမီးလေးဝက်သက်တွေပေါက်တော့ မေမေ့မှာစိတ်မကောင်းလိုက်တာ… တပတ်သားဘဲရှိသေးတဲ့မောင်လေးကို ကူးမှစိုးလို့ ဆရာဝန်က အိပ်ရာခွဲအိပ်ခိုင်းတဲ့အခါ သမီးလေးငိုတော့ မေမေသနားလိုက်တာကွယ်… လေးနှစ်အရွယ်သမီးလေးဟာ မေမေ့ရင်ငွေ့မှာခိုလှုံချင်တုန်းဆိုတာ မေမေနားလည်တာမို့ အဲဒီညတွေမှာ မောင်လေးအိပ်ရင် သမီးဆီပြေး၊ သမီးအိပ်ရင် မောင်လေးဆီပြေးနဲ့ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း ဟိုဒီကူးရင်း မေမေမအိပ်ဖြစ်ဘဲ မိုးလင်းခဲ့ရတဲ့နေ့တွေဟာ အမှတ်တရတွေပါဘဲ… မေမေ့သမီးလေးဟာ သွက်လက်ပြီးဥာဏ်ကောင်းသလို စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူလေးလဲဖြစ်တယ်… မောင်လေးအပေါ်အနိုင်ယူ ဗိုလ်ကျ မနာလိုခြင်းတွေလဲမရှိခဲ့ဘူး… သမီးလေးခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာသမီးမောင်လေးကိုလဲ သမီးလေးတတ်တဲ့ကျောင်းမှာဘဲစထားခဲ့တယ်… အဲဒီနှစ်က သမီးတို့ကျောင်းကထုတ်တဲ့ Year Book အတွက် မောင်နှမနှစ်ယောက်စာမေမေ ပိုက်ဆံပေးထားပေမဲ့ ကျောင်းက သမီးလေးကိုဘဲ စာအုပ်ပေးပြီး မောင်လေးအတွက် မပေးလိုက်ဘူးတဲ့… သူ့မောင်လေးစာအုပ်မရမှန်းလဲသိရော သမီးလေးဟာ ကျောင်းရဲ့ ရုံးခန်းကိုသွားပြီး မေမေက မောင်နှမနှစ်ယောက်စာ ပိုက်ဆံပေးထားရက်နဲ့ သူဘဲစာအုပ်ရပြီး သူ့မောင်လေးမရသေးလို့ အခုသူ့မောင်လေးအတွက် တအုပ်ပေးပါလို့ သွားတောင်းခဲ့တယ်… ရုံးခန်ကအမျိုးသမီးက မေမေက တစ်အုပ်စာဘဲပေးထားလို့ သမီးလေးကိုဘဲပေးတဲ့အကြောင်းငြင်းတဲ့အခါ သမီးလေးက မေမေနှစ်ယောက်စာပေးထားတာသေချာကြောင်း ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းစာရွက်လဲ သူ့မှာပါမသွားဘဲနဲ့ ခပ်တည်တည်ပြန်ငြင်းပြီး ရုံးခန်းမှာဘဲ ပေရပ်နေတဲ့အခါ အဲဒီအမျိုးသမီးမှာ မနေနိုင်တော့ဘဲ စာရင်းပြန်စစ်ကြည့်မှ နှစ်အုပ်စာပေးထားကြောင်း တွေ့သွားတော့ သမီးလေးကို တောင်းပန်ပြီး မောင်လေးအတွက်တစ်အုပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့… အဲဒီနေ့က မေမေကျောင်းသွားကြိုတော့ သူ့မောင်လေးအတွက် စာအုပ်ရအောင်တောင်းပေးလိုက်နိုင်တဲ့သမီးလေးက ပီတိတွေနဲ့ပြုံးလို့…
သမီးလေးဟာကျောင်းမှာလဲ စာတော်တဲ့စာရင်းဝင်သူဖြစ်တယ်… အကျင့်စာရိတ္တမှာလဲ ဆရာမတွေချီးကျူးရတဲ့သူဖြစ်တယ်… သူငယ်ချင်းတွေချစ်ခင်ခြင်းကိုလဲခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်… သမီးလေးသူငယ်ချင်းတွေရဲ့မိဘတွေက လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သမီးလေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ခလေးတွေ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ရတဲ့အတွက် သူတို့ဝမ်းသာကြောင်းပြောကြတဲ့အခါ မေမေသိပ်ဝမ်းသာရတယ်… မေမေ့သမီးလေးဟာ မေမေ့ အသက်ရှင်ရာအကြောင်းရင်းလေးပါကွယ်… သမီးလေးဟာ မေမေ့ဘဝရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်သလို မေမေ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်… သမီးလေးဟာ မေမေ့သမီးလေးလာဖြစ်နေတာကို မေမေသိပ်ဝမ်းသာသလို ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်…. သမီးလေးကြောင့်မေမေ့ဘဝအသက်ရှင်ရပ်တည်မှုဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိလာတာမို့ သမီးလေးကို မေမေသိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်…. သမီးလေးကြောင့် မေမေ့ရဲ့ နေထိုင် ပြောဆိုမှုတွေ ကိုယ်နှုတ်အမူအရာတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာခဲ့ရတာ… မေမေဘာလုပ်လုပ် သမီးလေးဟာ မေမေ့ကို အတုယူပြီးလိုက်လုပ်နေမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မေမေ အစစအရာရာ ဆင်ခြင်လာနိုင်ခဲ့တာ… အဲဒါတွေဟာ သမီးလေးကြောင့်မို့ သမီးလေးကို မေမေသိပ်ကျေးဇူးတယ်…
သမီးလေးရဲ့ ဆယ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ သမီးလေးအတွက် ဆယ်ချက်သောဆုကို မေမေတောင်းဆုပြုပေးလိုက်ပါတယ်..
၂။ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတိုင်းအပေါ် အလင်းပေးလမ်းပြနိုင်သူ နားလည်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါစေ။
၃။ပြသနာတခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတိုင်း သူများကို အပြစ်မဖို့တတ်ဘဲ ဥာဏ်ပညာနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။
၄။အမှားနဲ့အမှန်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ ထိုးထွင်းဥာဏ်ရှိသူဖြစ်ပါစေ။
၅။ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းမြင် မနာလိုသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ မတုန့်ပြန်ဘဲ သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမြင်တတ်ပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်ကာ မေတ္တာဖြင့်အနိုင်ယူတတ်ပါစေ။
၆။သူများပြောစကားတွေကိုနားမယောင်ဘဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ အမှန်တရားကို
၇။အားငယ်သူကိုအားပေးတတ်ပြီး ဆင်းရဲသူကို မေတ္တာပြ ပေးကမ်းနိုင်သူဖြစ်ပါစေ။
၈။ကြီးသူကိုရိုသေ ငယ်သူကို ကြင်နာတတ်ပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူလေးဖြစ်ပါစေ။
၉။ဘဝမှာ မထင်မှတ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံရတဲ့အခါ မယိုင်လဲဘဲ အဆိုးထဲကနေ အကောင်းတွေကို ရှာကြံသင်ယူတတ်သူဖြစ်ပါစေ။
၁၀။မေ့သမီးလေး ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ ဖြစ်လာတာတွေ တထပ်တည်းကျပါစေ။
Posted by rose of sharon at 7:04 AM 35 comments: Links to this post
စကာင်္ပူသွားဘို့အတွက် အောက်တိုဘာလထဲကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်… ဒီဇင်ဘာလမှာဟိုတယ်တွေအခန်းပြည့်တတ်တာမို့ ဟိုတင်ဘွတ်ကင်အတွက် အရင် စလှုပ်ရှားရတယ်… ခင်ပွန်းသည်ရော ခလေးတွေပါ နှစ်သက်အဆင်ပြေမဲ့ ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တဲ့ဟိုတယ်ကိုရှာရပါတယ်… အကြိုက်တွေ့တဲ့ ဟိုတယ်ရဲ့လိပ်စာရှာ ဆက်သွယ်ပြီးမှ ယောက္ခမမောင်နှံက သူတို့လဲစကာင်္ပူလာခဲ့မယ် ဆိုတော့ ဘွတ်ကင်ကို ပြန်ပြင်ရပါတယ်… ဒါနဲ့တင်မပြီး၊ မလေးရှားက မလ္လကာကိုလည်း နှစ်ရက်သွားလည်ဦးမယ်ဆိုတော့ အဲဒီအတွက် ဟိုတယ်ရှာရပြန်ရော… ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ပြီးတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်တင်ပြီးသားကိုငွေချေပြီး E Ticket ကို ပရင့်ထုတ် မိတ္တူကူးပြီး စကာင်္ပူဗီဇာလျှောက်ရပါတယ်… မလေးဗီဇာလဲယူရဦးမှာမို့ စကာပူဗီဇာကို အရင်လျှောက်တာလိုက်တာ ဗီဇာလည်းရရော ကိုယ်မလေးကနေ စကာင်္ပူကို ပြန်ဝင်မဲ့နေ့က E Visa ထဲမှာ valid မဖြစ်တော့ဘူး… သံရုံးကိုပြန်ပြောပြတော့ စကာင်္ပူရောက်မှ extention ထပ်လုပ်လိုက်ပါတဲ့… ကိုယ်ကတော့ အရင်လို သုံးလအတွင်း valid ဖြစ်မယ်ထင်လို့ ကြိုလျှောက်လိုက်တာ အခု တစ်လအတွင်းဘဲ valid ဖြစ်တော့ အလုပ်ကတော့ ရှုတ်ရဦးမယ်…
စကာင်္ပူဗီဇာကလျှောက်ရတာ အဆင်ပြေလွယ်ကူပေမဲ့ မလေးဗီဇာက ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်နဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်တင်မကဘူး… တခြား အထောက်အထားတွေပါပေးရတယ်… သူတို့တောင်းတာတွေ ကိုယ်ပေးနိုင်လို့သာ ဗီဇာပေးတာ… ကိုယ်သွားလေရာ အမြဲခေါ်နေကျ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အကူအတွက်တော့ ဗီဇာမရဘူး… သူ့ကို စကာင်္ပူမှာဘဲနှစ်ရက်ထားခဲ့ရတော့မှာ…
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမဲ့ အရင်တခေါက်လို ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတချို့နဲ့တော့ တွေ့ဖြစ်တော့မယ်မထင်ဘူး… ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘဲနှုတ်ဆက်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်… အလှုအတွက်ပိုက်ဆံစိုက်ပေးထားတဲ့ ကြွေးရှင်ညီမလေးနှစ်ယောက်နဲ့တော့ တွေ့ဖြစ်မှာပါ… တခြားမောင်နှမတွေနဲ့တွေ့ဘို့ကတော့ အခြေအနေအရပါဘဲ… ယောက္ခမမောင်နှံက တကောက်ကောက် ပါမှာမို့ ကျမဆန္ဒရှိသလို ကျမရဲ့ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေနဲ့ မတွေ့ဆုံနိုင်ရမှာကိုတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး… ကျမမှာဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ မောင်နှမတွေကိုတော့ ကျမဖုန်းဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်မှာပါ…
ရှော့ပင်းစန်တာနဲ့ ကစားကွင်းတွေမှာ ခလေးနှစ်ယောက်လက်တွဲထားတဲ့ မျက်လုံးပြူးပြူး နှုတ်ခမ်းထော်ထော် ဗိုက်ပူပူ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင် တော့ ကျမပါဘဲ…လှမ်းခေါ်လိုက်ပါနော်…း))
Posted by rose of sharon at 6:36 PM 18 comments: Links to this post
pls see the latest update for the kid operation. The status has been updated at our post at Facebook.
... ကလေးနာမည်က မောင်သန်းဇော်ဦးပါ။ အသက်က ရနှစ်ပါ။ ဖခင်ကတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ သူခံစားနေရတဲ့ရောဂါက အသည်းမှာ ရေအိတ်တည်နေတာပါ။ လက်ရှိ စစ်တွေမှာရှိနေပြီး မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ တနင်္ဂနွေနေ့ကို ရန်ကုန်ကိုရောက်ပါမယ်။တနင်္လာနေ့မှာ ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးကို တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိရသမျှအခြေအနေများကို ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။
လှူဒါန်းထားကြသောအလှူရှင်များအနေဖြင့်ယခင်ဆက်သွယ်ရန်ပေးထားသော ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ် နှင့် နေရပ်လိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသည်။ အလှုရှင်များ၊ လှူဒါန်းငွေအသေးစိတ် နှင့် ခွဲစိတ်မှုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို စာရင်းနှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပေးပါမည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုကြသောသူများအနေဖြင့် ယခု ဖေ့စ်ဘုတ်လိပ်စာကို မက့်ဆေ့ခ်ျပို့၍ မေးမြန်းနိုင်ကြပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
င်္(Facebook ရဲ့ AaB wall မှာကလူသစ်တင်ထားတာကို Copy, paste လုပ်လိုက်တာပါ)
Posted by rose of sharon at 3:48 PM 1 comment: Links to this post
ဒီသတင်းလေးကို The Voice Myanmar
မူရင်းသတင်း မှာဖတ်မိလိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်... ဒီခလေးလေးဟာ အသည်းရောဂါကြောင့် အခုလိုမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်မီ အကြီးစားခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ်သိန်း၃၀ခန့်လိုအပ်နေပါတယ်... လောလောဆယ် အလှုငွေ၎သိန်းခန့်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်... ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ AaB အဖွဲ့မှ ဘလော့ဂါများလည်း ခလေးငယ်အတွက် အလှုငွေကောက်ခံလျှက်ရှိပါတယ်... ရန်ကုန်သို့တိုက်ရိုက်လှုဒါန်းမည့်သူများ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၀၇၉၇၆၅ သို့ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပြီး AaB( All about Bloggers) မှတဆင့်လှုဒါန်းလိုသူများ comment မှာ ဆက်သွယ်ရန် အီမေးလ်လိပ်စာများချန်ထားပေးခဲ့ကြပါက လှုဒါန်းရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးပါမယ်ရှင်...
ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်သုံးမဲ့ထဲက နည်းနည်းလေးဖဲ့လှုပြီး အသက်တစ်ချောင်းကို ကယ်တင်နိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအတွက် ခံစားရတဲ့ကြည်နူးပီတိဟာ ဘာနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်လို့မရနိုင်ပါဘူး...
စာဖတ်သူ ဘလော့လာလည်သူမောင်နှမများ စေတနာစိတ်ရှေ့ထားပြီး ဒီခလေးလေးအတွက် လှုဒါန်းနိုင်ကြစေရန်ရည်ရွယ်လျှက်.....
Posted by rose of sharon at 7:19 AM6comments: Links to this post